ကိုလက်စထရောနှင့် ကျန်းမာရေး | Colors Rainbow
August 9, 2017 June 28, 2018 Admin Admin 1209 Views0Comments Cholesterol, public health	min read
ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုကြတဲ့အခါ ကိုလက်စထရောလို့ ပြောလိုက်ရင် တော်တော်များများက မကောင်းတဲ့အရာအဖြစ် သိမြင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုလက်စထရောဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုတာလေးကို သိစေချင်တာရယ်၊ သူ့ရဲ့ အကျိုးပြုပုံလေးတွေကို သိစေချင်တာကြောင့် ဒီဆောင်းပါး ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပထမဆုံး ကိုလက်စထရောဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးနဲ့ စပါမယ်။
ကိုလက်စထရောကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သွေးထဲတင်မကဘဲ ဆဲလ်တွေထဲမှာပါ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုလက်စထရောဟာ ဆဲလ်အမြှေးပါးတွေ၊ ဟော်မုန်းတွေ၊ ဗီတာမင် D နဲ့ အဆီချေဖျက်ရာမှာ ကူညီတဲ့ သည်းခြေအက်ဆစ်တွေ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ ကူညီပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုလက်စထရောဟာ မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်မှုကို ကူညီပေးပြီး ဦးနှောက်အာရုံကြော လုပ်ငန်းဆောင်တာ (Neurological Function)အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ အသည်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ရ၅ ရာခိုင်နှုန်းသော ကိုလက်စထရောတွေကို ပြုလုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Conventional Medicine အရ ကိုလက်စထရော အမျိုးအစား (၂) မျိုး ခွဲပါတယ်။
၁။ HDL- High Density Lipoprotein
HDL ကတော့ ကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောလို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ HDL ဟာ နှလုံးရောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့ သွေးလွှတ်ကြောတွေထဲက ကိုလက်စထရောတွေ၊ အခြားအရာတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ နည်းအောင် လျော့ချပေးတာမို့ ကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောလို့ ဆိုပါတယ်။
၂။ LDL- Low Density Lipoprotein
LDL ကတော့ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောပါ။ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံက HDL နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်ပါတယ်။ LDL ဟာ သွေးတွေထဲမှာ လှည့်လည်နေပြီး သွေးလွှတ်ကြောတွေထဲမှာ စုပုံနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုစုတာ များလာပြီဆိုရင်တော့ သွေးလွှတ်ကြောတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း ကျဉ်းမြောင်းလာပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကို နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်း (Atherosclerosis) အခြေအနေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျဉ်းမြောင်းနေတဲ့ သွေးလွှတ်ကြောနေရာတွေကို ခန္ဓာကိုယ်က (သွေးခဲ သို့မဟုတ် အဆီခဲ) တစ်ခုခုက သွားပိတ်လိုက်မိပြီဆိုရင် Heart Attack နဲ့ လေဖြတ်ခြင်း (Stroke) ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နှလုံးနဲ့ ဦးနှောက်သွေးကြောနေရာတွေကို သွားပိတ်ရင် ဒီလိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
HDL နဲ့ LDL ကို အကောင်းအဆိုး ခွဲတဲ့အပေါ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံက အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကုသတဲ့နေရာမှာ ထင်ရှားတဲ့ ဒေါက်တာ Ron Rosedale က ကိုလက်စထရောနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့အယူအဆကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“LDL ရော HDL ရောဟာ ပရိုတိန်းနဲ့ အဆီ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ လီပိုပရိုတိန်း (Lipoproteins) တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုလက်စထရောဆိုတာ တစ်မျိုးပဲ ရှိတယ်။ ကောင်းတာလည်း မရှိဘူး။ ဆိုးတာလည်း မရှိဘူး။ ကိုလက်စထရောဟာ ကိုလက်စထရောပဲ။ ကိုလက်စထရောက အခြားအဆီတွေ၊ ပရိုတိန်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး သွေးတွေထဲ စီးဆင်းတဲ့အခါ သွေးနဲ့ ကောင်းစွာ မရောနှောနိုင်တော့ပါဘူး။ အဆီ အစိုင်အခဲတွေဟာ ပရိုတိန်းတွေကို အသုံးပြုပြီး တစ်ရှူးတွေ၊ ဆဲလ်တွေဆီကို ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် သွားရပါတယ်။ ပရိုတိန်းနဲ့ အဆီတွေဟာ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိကြပါတယ်။ LDL ကို မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောလို့ ပြောပေမယ့် LDL ဟာလည်း အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ သိပ်သည်းဆ နည်းတဲ့ LDL အမှုန်လေးတွေသာ လူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတာပါ။ အဲဒီ LDL တွေဟာ ဓာတ်တိုးမှု ပြုလုပ်တဲ့အခါ သွေးလွှတ်ကြော နံရံတွေကို ညှစ်တတ်ပါတယ်”
Total Cholesterol Count
Triglycerides မြင့်တက်လာတာဟာ နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ Triglycerides မြင့်တက်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေကတော့ သကြားများများ စားသုံးခြင်း၊ အစေ့အဆန်များ အစားများခြင်း (ပြောင်းဖူး၊ ပဲ)၊ စီးကရက်နဲ့ အရက် အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Lipoproteinsaသို့မဟုတ် Lp-a
Lp-a ဟာ LDL (မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရော) နဲ့ apoproteinaတို့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ Lp-a တက်လာခြင်းဟာ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်မှုအတွက် ကြီးမားတဲ့ အကြောင်းတရားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သမားတော်တွေကတော့ investigation လုပ်ရင် Lp-a ကို စစ်တာ နည်းပါတယ်။
Cholesterol ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေပါ
လူတွေ အတော်များများရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကိုလက်စထရောဆိုတာ မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ် သိထားပြီးကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလက်စထရောဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှ ဆဲလ်အမြှေးပါးတွေရဲ့ မရှိမဖြစ် ပါဝင်ပစ္စည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုလက်စထရောမရှိဘဲ ဘယ်သက်ရှိကမှ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ကိုလက်စထရောဟာ Steroid Hormone တွေရဲ့ ရှေ့ပြေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုလက်စထရောသာ မရှိရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးပါတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို ပြုလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ- estrogen, testosterone, cortisone.
Cholesterol နှင့် ရောင်ယမ်းခြင်း
ရောင်ယမ်းမှု ဖြစ်နေချိန်အတွင်းမှာ သွေးကြောတွေဟာ သွေးထွက်လွန်မှုမဖြစ်အောင် ညှစ်ထားရပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ သွေးတွေ ခဲလာနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်က ပြင်ပက မကောင်းတဲ့အရာတွေ၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ဆဲလ်တွေ၊ ဓာတုပစ္စည်းတွေကို စေလွှတ်ပါတယ်။ ပျက်စီးသွားတဲ့ နေရာတွေကို ပြန်လည်ဖာထေးဖို့ ဆဲလ်တွေ ပွားရပါတယ်။ တကယ်လို့ သွေးလွှတ်ကြောတစ်နေရာမှာ ထိခိုက်ပျက်စီးတယ်ဆိုရင် သွေးခဲတာ၊ သွေးကြောတွေရဲ့ ညှစ်အားစတာတွေဟာ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါတွေကို ဖြစ်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျက်စီးသွားတဲ့ ဆဲလ်တွေကို အစားထိုးဖို့ ကိုလက်စထရောရဲ့ ကဏ္ဍဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆဲလ်မှန်သမျှ ကိုလက်စထရောမရှိဘဲ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဆဲလ်ပျက်စီးမှု များလာလေလေ အစားထိုးဖို့ ဆဲလ်တွေ လိုအပ်လာလေလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆဲလ်တွေ အသစ်ပွားဖို့ အသည်းက ကိုလက်စထရောကို လုပ်ပေးရပါတယ်။ ပြီးရင် သွေးတွေထဲကို ထုတ်လုပ်ပေးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရောင်ယမ်းမှုကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ ကိုလက်စထရောရဲ့ ကဏ္ဍဟာ အရေးပါပါတယ်။ နာတာရှည် ရောင်ယမ်းမှုတွေမှာတော့ CRP (Creative Protein) ကို စစ်ဆေးလေ့ ရှိကြပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ National Cholesterol Education Program က နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ များသူတွေကို LDL Level ကို လျော့ချကြဖို့ အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် မတိုင်ခင်က LDL ပမာဏ ၁၃၀ မီလီဂရမ်ဟာ သင့်တော်တယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အသစ်ထွက်လာတဲ့ Guidelines တွေမှာ LDL ပမာဏဟာ ၁၀၀ အောက်နဲ့ တစ်ချို့ အလွန်ဆိုးရွားတဲ့သူတွေမှာ ရ၀ အောက်က အသင့်တော်ဆုံးဆိုပြီး ဖော်ပြလာပါတယ်။
Medco Health Solutions ရဲ့ အချက်အလက်တွေအရ အမေရိကန်လူမျိုး တစ်ဝက်ကျော်ကျော်လောက်ဟာ နာတာရှည်ရောဂါအတွက် ဆေးဝါးတွေ သောက်သုံးနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတွေမှာ ဒုတိယအသုံးများဆုံးကတော့ ကိုလက်စထရော လျော့ချတဲ့ ဆေးဝါးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နာတာရှည်ရောဂါအတွက် ဆေးဝါး သောက်သုံးနေရသူ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ကိုလက်စထရော လျော့ချတဲ့ ဆေးဝါးတွေကိုပါ တွဲဖက်သောက်သုံးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီတွေကတော့ “ကိုလက်စထရော လျော့ချတဲ့ဆေး မသောက်ရတဲ့သူတွေကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ”လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဆေးတွေဟာ အသည်းကနေ ကိုလက်စထရောကို မထုတ်လုပ်နိုင်အောင် ဓာတ်ကူပစ္စည်း (Enzymes) သွားတားရုံတင်မကဘဲ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဇီဝဓာတုဖြစ်စဉ်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုပါ တားဆီးပါတယ်။ ကိုလက်စထရော လျော့ချတဲ့ဆေး တစ်နည်းအားဖြင့် Statin ဆေးဝါးတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Coenzyme Q10 (CoQ10) တွေကို လျော့ပါးစေပါတယ်။ CoQ10 ဟာ နှလုံးနဲ့ ကြွက်သားတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ CoQ10 လျော့နည်းခြင်းကြောင့် မောပန်းခြင်း၊ ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း၊ နှလုံးအားနည်းတာတွေပါ ဖြစ်စေပါတယ်။ Statin ဆေးဝါးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုကတော့ atrogine-1 gene ကို Statin ဆေးဝါးတွေ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ကြွက်သား ချိနဲ့သိမ်သွားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလက်စထရောနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆတွေအကြောင်းကို Dr Ron Rosedale တင်ပြထားတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ နှလုံးကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ဖို့ ကြက်ဥနဲ့ ပြည့်ဝဆီ (Saturated Fat) တွေကို ရှောင်ရမယ်ဆိုတာတွေက မှားပါတယ်။ Nutrition Pioneer Ancel Keys (1950) က လူတွေ စားသုံးနေတဲ့ အဆီဟာ နှလုံးသွေးကြောရောဂါကို ဖြစ်စေတယ်လို့ ပြောခဲ့တာကို မှားတယ်လို့ Dr Ron Rosedale က ပြောပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက အာဟာရပညာရှင်တွေ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ လက်ခံယုံကြည်ခဲ့ကြပြီး လူထုကို ထောပတ်၊ အနီရောင်အသား၊ တိရစ္ဆာန်အဆီ၊ ကြက်ဥနဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို မစားဖို့ ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ကာရိုလိုင်းနားတောင်ပိုင်းက ဆယ်ကျော်သက်တွေကို လေ့လာမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို အနီရောင်အသား၊ တိရစ္ဆာန်အဆီ၊ ဆီကြော်မုန့်၊ ထောပတ်၊ ကြက်ဥ၊ နွားနို့၊ အမဲသား၊ ဝက်အူချောင်း၊ ဒိန်ခဲစတာတွေကို အကန့်အသတ်မရှိ စားစေပါတယ်။ နောက်ပိုင်း စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေအရ ဒီလိုစားသောက်မှုတွေနဲ့ သွေးထဲက ကိုလက်စထရော ဆက်နွယ်မှု မရှိဘူးဆိုတာကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ Medical Research Council ကလည်း ထောပတ်စားသုံးတဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့ချတယ်ဆိုတာ သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
ကိုလက်စထရောကို သဘာဝနည်းနဲ့ ဘယ်လို လျော့ချမလဲ
၁။ တိရစ္ဆာန်ဆီကရတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် Omega3အဆီကို မှီဝဲပါ။ သုတေသနအသစ်တွေမှာ ၅၀၀ မီလီဂရမ်လောက်ကို မှီဝဲခြင်းက ကိုလက်စထရောနဲ့ Triglycerides ကို ကျဆင်းစေပြီး HDL ကို တိုးစေပါတယ်။
၂။ နေ့စဉ် အစားအသောက်တွေထဲမှာ အစေ့အဆန် (ပြောင်းဖူး၊ ဆန်၊ မြေပဲ) နဲ့ သကြား အလွန်အကျွံ စားသုံးခြင်းကို ရှောင်ပါ။ သကြားလို့ ပြောတဲ့နေရာမှာ တချို့ အချိုလွန်ကဲတဲ့ သဘာဝသကြား မဟုတ်တာတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။
၃။ သေချာကျက်အောင် ချက်ပြုတ်မထားသော အစားအစာများကို ရှောင်ပါ။
၄။ သင့်တော်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဟာ သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းစေပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ ခုခံအားစနစ်မှာ ပါဝင်တဲ့ အရာတွေကလည်း အားကောင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ဆေးလိပ်နဲ့ အရက် အလွန်အကျွံ သောက်သုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၆။ စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျအောင် နေပါ။ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ပါ။
“သင့်ကျန်းမာရေးဟာ အမှန်တကယ်တော့ သင့်လက်ထဲမှာ” ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ကျန်းမာရေးအတွက် ဂရုပြုသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို သိရှိပြီး နေထိုင်ခြင်းဖြင့် အနာရောဂါကင်းစွာ နေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The Cholesterol Myth That is Harming Your Health by Dr Mercola.
The Article “Skinny on Fats” by Fallon and Enig’s
← အတ္တအသိ (Self-Knowledge)
How to Win at Checkers →
March 22, 2016 Admin Admin 1
ယောက်ျားချင်း ချစ်သူများနှင့် လိင်ကျန်းမာရေး
June 6, 2016 Admin Admin 0